मेलम्ची र १८ टन धुलो
महानगरले ब्रुमर चलाएकै दिन १८ टन धूलो सफा पारेछ । एकैदिन १८ टन धुलो निकाल्न सकिने राजधानी कस्तो सहर होला ? र, ती धूलो कता मिल्कायो होला ? राजधानी प्रदूषित सहर हो, यो प्रदूषणले कतिलाई मुटु, फोक्सोको रोग लाग्यो, कति मरे, बाँचेकाहरु अस्पताल धाउन बाध्य भएका छन्, यसको जिम्मेवारी सरकारले लिने कि नलिने ? यसकारण यो सरकार जनताप्रति जिम्मेवार सरकार होइन, जनतालाई यसरी प्रदूषणको महामारीमा कुनै पनि लोकराज्यले राख्न सक्दैन, जुन नेपालमा देखिएको छ । हरेक दिन धुलोमा श्वास फेरेर हिड्न बाध्य पारिएका नागरिक जो सहिरहेका छन्, नागरिक पनि जिम्मेवार छन् । आफूले भोग्नु परेका समस्यालाई स्वीकार गरेर, सहेर हिड्नु नागरिकको सोझोपन लोकतन्त्रका लागि उपयुक्त होइन ।
सरकार गलत गर्दै जाने र नागरिक सहदै जाने भनेको सरकारलाई बदमासी गर्न, जनताप्रतिको जिम्मेवारी बहन नगरे पनि छुट छ भन्ने अधिकार दिएजस्तो हो । नागरिकले अप्ठेरो परेको कुरा सरकारलाई भन्नैपर्छ, जनताप्रतिको जिम्मेवारी बहन गर्न र नैतिकताको पालना गर्न बाध्य पार्नैपर्छ । विवेकहीन सरकारलाई जनताले नभनेसम्म सरकार अकर्मण्य भइनै रहनेछ ।
मेलम्चीका नाममा, सडक सुधारका नाममा, नदी नियन्त्रणका नाममा अहिले पनि सरकारले सडक खनिरहेको छ । न सडक सुधार हुन्छ, न नदी नियन्त्रण, न मेलम्ची नै निश्चित छ । अनिश्चित र बेपर्वाह काम गरेर सरकारले भ्रष्टाचार बढाइरहेको छ ।
यसकारण आमनागरिकले यी सबै विषयमा स्वेतपत्र माँग गर्न सक्नुपर्छ । किन यस्तो भइरहेको छ, किन मेलम्ची आइरहेको छैन र सहरलाई धुलोमय बनाइएको छ । यी सबै कुरा आमजनताले थाहा पाउनैपर्छ । कहिले सुधार हुन्छ, कसको कारण जनताले दुःख पाइरहेको, जिम्मेवार व्यक्ति निकाय दण्डित पनि हुनुपर्छ ।